Kenya oo qaaday tallaabo cusub oo la xiriirka kiiska dacwada badda Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar Kenya oo qaaday tallaabo cusub oo la xiriirka kiiska dacwada badda Soomaaliya
Muqdisho (Caasimada Onlin) – Dowladda Kenya oo dhowaan ku guul darreysatay dalabkeedii ahaa in dib loogu dhigo dacwadda badda ee kala dhexeysa Soomaaliya ayaa haatan bedashay dhammaan qareenadeedii dacwadda badda ee taal maxakamadda ICJ.
Dhammaan qareenadan ayaa ah kuwa caalami ah oo leh qibrad sare, islamarkaana kasoo shaqeeyey xarumo kala duwan & jaamacado, waxaana hoggaaminaya nin lagu magacaabo Prof Sean Murphy oo uu weheliyo qareen kale oo la yiraahod Tullion Treves.
1: Hoggaamiyaha qareenada oo lagu Magacaabo Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law, 2: Garsoore hore iyo bare Culuumta Sharciga ka dhiga dalka Ingiriiska Tullion Treves., 3: Prof Laurence Boisson De Chazournes oo isna khabiir ku ah sharciga caalamiga kana socda jaamacadda Geneva ee dalka, 4: Prof Phoebe Okowa, oo bare ka ah Sharciga Caalamiga ee Jaamacadda Queen Mary ee London ayaa ah qofka kaliya ee Kenyanka ah, waxaana ay qeyb ka aheyd dacwada badda ee Gambia ka gudbisay Myanmar, 5: Prof Makane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo ka dhiga sharciga caalamiga ah Jaamacadda Geneva., 6: Sidoo kale waxaa kooxda ka mid ah Prof Makane Mbengue, oo reer Senegal ah, oo dhiga sharciga caalamiga ah ee Jaamacadda Geneva., 7: Christian Tams, oo bare ka ah Jaamacadda Gasglow. Waa Muwaadinad Jarmal ah, iyada oo dhowr jeer ka soo muuqatay isla maxkamada kiisas kala duwan iyo 8: Eran Sthoeger oo laga keenay Israel, waxaana uu ka qeyb qaatay kiisas u dhaxeeyay dalalka Peru & Chile.
Xubnaha ay Kenya soo xulatay sidoo kale waxaa ka mid ah madaxweynaha Nuqulada Juquraafiga Coalter Lathrop, kaas oo qareenada u fidin doono caawimaad dheeri ah.
Si kastaba arrintan ayaa kusoo aadeyso, iyada oo haatan wax ka yar bil ay ka harsan tahay dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya kala dhexeysa Kenya.